08/08/2015 – Gentleman Magazine
အမျိုးသားတို့ကို ညှို့ငင်နိုင်သည့် အမျိုးသမီးတို့၏ ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်း(၅)ခု
ဒါတွေဟုတ်ပါတယ်ဆိုတာ သင်ဝန်ခံလိုက်ပါတော့…. မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ တစ်ကိုယ်လုံးကို မိမွေးတိုင်းဖမွေးတိုင်း မြင်ရတွေ့ရရင် သဘောကျပါလား။ ဒါပေမယ့် အဲဒီလိုမြင်တွေ့ရဖို့က ကံအရမ်းကောင်းမှဖြစ်မှာပါ။ တစ်ခါတစ်လေမှာတော့ စိတ်ကူးလေးနဲ့ ဆက်တွေးကြည့်လို့ရလောက်အောင်လေးပဲ တစ်စွန်းတစ်စမြင်တွေ့ရတာက ပိုမိုက်တယ်လို့ မထင်မိဘူးလား။ အခု ဖော်ပြမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ တစ်စွန်းတစ်စလေးပဲ တွေ့ရမြင်ရပေမယ့် အမျိုးသားတွေရဲ့ အာရုံကို ညှို့ငင်ဖမ်းစားနိုင်တဲ့ အမျိုးသမီးတို့ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းတွေ အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။
သင် ကြိုက်တဲ့ ကောင်မလေးတစ်ယောက်ကို စကားပြောရတာထက် ကြောက်ဖို့ကောင်းတာ ဘာများရှိမလဲ။ သင်ကံကောင်းတာက လူမှုရေးပညာရှင်တွေက ပိုးပန်းမှု အောင်မြင် မအောင်မြင် ဆုံးဖြတ်ပေးနိုင်တဲ့ အချက် ၉ ချက်ကို ဖော်ပြပေးထားပါတယ်။ ၁. စုံတွဲတွေလဲ ပလူးပလဲ ပိုးပန်းဖို့ လိုပါတယ် ပိုးပန်းတယ်ဆိုတာ လူပျိုကိစ္စပါ။ ဒါပေမယ့် စုံတွဲတွေလဲ
Peyronie’s Disease ဆိုတာ လိင်တံထိပ်ဖူး ပုံစံ မမှန်မှုကြောင့် ကျား လိင်အင်္ဂါ ကောက်သွားစေတဲ့ အခြေအနေမျိုးပါ။ အဲလိုဖြစ်နေရင် ပျော်ရွှင်စရာ လိင်မှုဘဝ ရဖို့ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် နာကျင်မှု သက်သာစေမယ့် ကုထုံး တစ်ခုကတော့ စမ်းသပ်နေဆဲ အဆင့်မှာ ရှိပါတယ်။ လေ့လာသူတွေဟာ စမ်းသပ်မှုနှစ်ခုမှာ